ပထမသင်္ဂါယနာတင်ဒါယကာ အဇာတသတ်မင်းကြီး။
အဇာတသတ် မင်းသားသည် ဒေ၀ဒတ်ကို ဆရာတင်မိ၍ အပေါင်းမှားပြီး ဖခင်ဘုရင်ကြီးကို
သတ်မိသည်အထိ ပြစ်မှားဆိုးသွမ်းခဲ့ပါသည်။ ဖခင်ဖြစ်သူ ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီးကို သတ်မိသောကြောင့်
ကံကြီးထိုက်ပြီး အိပ်မပျော်သော ဝေဒနာ စွဲကပ်ခဲ့ပါသည်။ သူ၏ မျက်လုံးတို့ကို လှံချက်ပေါင်း အ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 2:41 PM No comments:
ဥစ္စာစောင့်ဆိုတာ တကယ် ရှိသလား
ဖိုးသား မေးစရာလေး ပေါ်လာလို့ပါ။ ဒီနေ့ (27.05.2009) ဖိုးသားနဲ့ ဖိုးသား မိတ်ဆွေ အစ်မ တစ်ယောက် အွန်လိုင်း ကနေ စာရိုက်ရင်း ပြောဖြစ်တယ် ဘုန်းဘုန်း။ အဲဒီမှာ သူပြော သွားတာက သူ့မောင်လေးက ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကပဲ ဆုံးသွားကြောင်း၊ အသက် (၂၁) ပြည့်ရုံလေးပဲ ရှိသေးကြောင်း၊ သူဆုံးအပြီး အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦးဆီကို ၀င်ပူးပြီး ပြောတာက သူ့ကို သိုက်က ပြန်ခေါ် သွားတာ ဖြစ်ကြောင်း (သိုက်နာမည်လည်း ပြောသွားပါတယ် ဘုန်းဘုန်း၊ အရပ်ဒေသတော့ ပြောမသွားဘူး) အဲလို ပြောသွား ပါတယ်။ အဲဒါ သူ့ကို လပြည့် လကွယ်တွေမှာ ကုသိုလ်လုပ်ပြီး အမျှပေးပါလို့လည်း ပြောသွား သေးတယ် ဘုန်းဘုန်း။
တရားတစ်ပုဒ်ဟောပြီးတိုင်း သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်သွားကြရာ၌
မေး။ ။ (2007-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထုတ် မြတ်ပန်းရဂုံတွင် `မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က တရားတစ်ပုဒ်ဟောပြီးတိုင်း သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်သွားကြရာ၌
(ဂ) ယခင်ဘ၀က သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့၍ ယခုဘ၀ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ် ရဟန္တာဖြစ်သွားသော သုတ္တန်များရှိလျှင် ညွှန်ပြပါ-ဟူသော ဦးကောင်းမွန်၏ မေးခွန်းကို ဖြေကြားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
အလှူဒါနပြုကြရာ၌ အလှူခံသူနှင့် အလှူပေးသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိစေရန်။
အလှူဒါနပြုကြရာ၌ အလှူခံသူနှင့် အလှူပေးသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိစေရန် မဟာဂန္ဓာ
ရုံဆရာတော်ကြီးက= အလှူခံမှာ၊ လယ်ပမာ၊ လှူရှာသူများ၊ လယ်သမား။
အများလှူဖွယ်၊ မျိုးစေ့နှယ်၊ နောက်ဝယ် အသီးစား။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 7:08 PM No comments:
အမေး။ ။အရှင်ဘုရား...တပည့်တော် မသိလို့မေးပါရစေဘုရား။ တရားပွဲတွေမှာ တရားနာရုံနဲ့ကုသိုလ်ရနိူင်ပါသလားဘုရား။
တရားတော်များကိုလဲ အမြဲတမ်း မနာကြားနိူင်ပါ။ တပည့်တော်သိချင်တာက တရားနာတာနဲ့ တရားအားထုတ်တာ ဘယ်ဟာက ကုသိုလ်ပိုရနိူင်လဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ဘုရား။ ။
အဖြေ။ ။တရားပွဲတွေမှာ တရားနာရုံနဲ့ ကုသိုလ်ရနိူင်ပါတယ်။ တစ်ခါတုန်းက ဖားကလေးတစ်ကောင်ဟာ တရားဟောနေတဲ့အသံကို ဘာမှန်းမသိသော်လဲ နားထောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ နားထောင်နေတဲ့အခိုက် ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ ဖားကလေးဟာ သေတဲ့အခါ နတ်ပြည်မှာ ဖားနတ်သားဆိုပြီး နတ်သားသွားဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ဖားကလေးဘ၀ဖြစ်စဉ်က တရားတော်အသံကို နားထောင်မိရုံပဲရှိပါသေးတယ်။ လူုဖြစ်က ဆိုဖွယ်ရာမရှိတော့။ ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အခါ ကုသိုလ်ရတယ်လို့ပဲပြောရပါမယ်။
အမှောက် ပယောဂ တကယ်ရှိ မရှိ
အမေး။ ။အရှင်ဘုရား…. အိမ်တစ်အိမ်မှုာ မကောင်းတဲ့အစောင့်ရှိတယ်၊ အနှောက်အယှက်တွေရှိတယ် ဆိုပြီး ဆရာဆိုသူက ပြောနေတာ ကြားလိုက်ရပါတယ်ဘုရား၊ တပည့်တော်သိချင်တာက အနှောက်အယှက်ဆိုတာ တကယ်ရှိ-မရှိ သိချင်ပါတယ်ဘုရား။
အဖြေ။ ။အမှောက်ပယောဂတို့ဆိုတာ လောကီအတတ်ပညာများ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကြောင်းကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း အမှောက်ပယောဂ ဟုတ်/မဟုတ် ဆိုတာကိုတော့ တတ်အပ်သေချာ မပြောနိူင်ပါ။ ဟုတ်တာလဲ ရှိတယ်။ အလိမ်ခံရတာလဲရှိ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အမှောက်ပယောဂရှိတယ်ဆိုပြီး တစ်ဖက်စောင်းနင်းမယုံကြည်ဖို့ပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းတွင် သာဝတ္ထိပြည်မှ အနာထပိဏ် သူဌေးကြီးသည် အလှူဒါနပြုလုပ်
ရာတွင် စံတင်ထိုက်သော သူဌေးကြီးတစ်ဦးဖြစ်၏။ ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်ကြီးကို ငါးဆယ့်လေး
ကုဋေ အကုန်ကျခံ၍ လှူဒါန်းရသည်ကိုပင် အားရတင်းတိမ်မှု မရှိဘဲ တစ်နေ့သုံးကြိမ် ဘုရား
တရားမွေ့လျော် နေတတ် ထိုင်တတ် အားထုတ်တတ်အောင်။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:49 PM No comments:
selfie ဆွဲသူများ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ ပိုတိုးနိင်သလော..?
ယနေ့ ကမ္ဘာတွင်မက မြန်မာပြည်မှာပါ ခေတ်စားလူကြိုက်များလာသော selfie ဆွဲခြင်းသို့မဟုတ် မိမိပုံ (သို့)အုပ်စုလိုက်ပုံကို ကိုယ့်ဖာသာ ဖုန်းကင်မရာဖြင့် ပြုံး၍တမျိုး ရီ၍တဖုံ၊ မဲ့၍တမျိုး ရွဲ့၍တဖုံ၊ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ရိုက်ပြီး လူမှုကွန်ရက် အထူးသဖြင့် facebook ၊ extergram တို့တွင် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများမြင်အောင် အချို့လဲ public မြင်အောင်တင်ကြပါတယ်၊ ဒီနေရာမှာ ရိုက်သူတင်သူတွေကို အပစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး တရားသဘောလေးနဲ့ မိမိဘာသာ တွေးမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ စိတ်ဝင်စားရင် ဆက်ဖတ် ပါ စိတ်မ၀င်စားလဲ ဗဟုသုတဖတ်သွားပါလို့ အတင်းကြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ.......။
သုန္ဒရီသတ်မှုနဲ့ ဘုရားရဲ့ ကံကြမ္မာဝဋ်ကြွေး။
မြတ်စွာဘုရားကို ကြည်ညိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အလွန်များတယ်။ ရဟန်းတွေကို ကြည်ညို
တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း အင်မတန်များတယ်။ လူတွေက ဘုရားကျောင်းတော်ကို သွားကြလာကြ
လှူကြတန်းကြဆိုတော့ တစ်ဖက်ဘာသာခြားဖြစ်တဲ့ ပရဗိုဇ်တွေကို ကြည်ညိုသူ၊ မေးမယ့်သူ၊
အနာထပိဏ် နဲ့ ၀ိသာခါ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ပွင့်ထွန်းတော်မူလာပြီးနောက် ကိုးကွယ်ရာနှင့် မကိုးကွယ်ရာကို ခွဲခြား
၍ ဟောကြားညွှန်ပြခဲ့ပါသည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောကြားမိန့်မှာသည်မှာ=
* “ ယော စ ဗုဒ္ဓဉ္စ ဓမ္မဉ္စ၊ သံဃဉ္စ သရဏံ ဂတော။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 7:59 PM No comments:
တစ်ခါက နတ်သားတစ်ယောက်က ဘုရားရှင်ကို မေးမြန်းလျှောက်ထားသည်၊ “ မြတ်စွာဘုရား …..ခွန်အားကို လှူချင်ပါတယ်၊ ဘာကိုပေးလှူရပါမလဲ ၊ အဆင်းကို ပေးလှူချင်ပါတယ်၊ ဘာကိုပေးလှူရပါမလဲ ၊ မျက်စိအလင်းကို ပေးလှူချင်ပါတယ် ၊ ဘာကိုပေးလှူရပါမလဲ ၊ ချမ်းသာသုခကို ပေးလှူချင်ပါတယ် ၊ ဘာကိုပေးလှူရပါမလဲ ဆိုခဲ့တဲ့ အရာအားလုံးကို ပေးလှူချင်ပါတယ် ဘာကိုပေးလှူရပါမလဲ “
တရားတစ်ပုဒ်ဟောပြီးတိုင်း သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်...